Ghọta SOPA | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 8, 2011 Tọzdee, Disemba 8, 2011 Douglas Karr
Ọ bụrụ n ’iwepụta oge iji chee echiche, Internetntanetị bụ naanị akụkụ nke akụnụba America nke na-eme nke ọma ugbu a. Ekwetaghị m na e nwere ihe ọ bụla asusu na ọ bụkwa otu akụkụ nke American aku na uba na ọchịchị bụghị malitere inwe mkpịsị aka ha. Onwa gara aga, e nwere ihe dị mkpa iwu tozuru oke na drafted na anya ịgbanwe ya st adi.
N'okpuru na anyị chọrọ iwu iwu nwebisiinka n'ịntanetị, ndị Chedo Iwu IP mepụtara na Senate na Kwụsị Iwu Ntanetị Online (SOPA) n'ime Houselọ. Ha abụọ bụ ihe iyi egwu na-eyi egwu ụgwọ akwụkwọ mmachi ịntanetị COICA nke afọ gara aga. Dị ka onye bu ya ụzọ, iwu a na-akpọ ihe egwu nchekwa ịntanetị, na-eyi egwu okwu n'ịntanetị, ma na-egbochi ịntanetị.
Mụtakwuo maka SOPA site na Infographic a, ọ nwere ike inwe nnukwu mmetụta na azụmaahịa na ihe ọhụụ na ịntanetị. Nke kachasị - mee ihe ma mee ka ndị nnọchianya gị mara na ị gaghị anagide ya:
Infographic site na Okwu Nkwado Azụmaahịa ma ọ bụ enyi m chọtara ya Jeff Jockisch na Google+!
Tags: effntọala ala eletrọnikinnwere onweinternetusu